ဘလော့ဂါကိုကြီးကျောက် လွမ်းချင်း | ပျူနိုင်ငံ
ဘယ်ဂယ်ပေါက်ကနေ အရှင်ထွက် ထွက်ပြီး
အားရင် ဘလော့လေး ဘာလေး
ထီ ပထမဆု မပေါက်သေး
ပိုက်ဆံ အထုပ်လိုက် မကောက်ရသေး
ဆက်ပြီး ဘလော့ မဂင်ကြတော့ဘူးဗျာ
ဘလော့ရွာကနေ အိမ်ပြောင်းသွားကြပြီ ဗျ …..
ကော်မန့် ရေး၊ ကြော်ငြာဝင်ခဲ့ဘူးတဲ့ဘလော့ဂါတွေ
ဘယ်သူများ တခုတ်တရ လွမ်းသေးသလဲလို့
မှိုတွေ ဆွဲလို့ …..
အရင်ကတော့ မျှော်ခဲ့ဘူးတယ် ….
ကမ်းနဲ့ ဝေးပေါ့ ….
တင်ပါ့ မြှောက်ပါ့မယ် …. ။ ။
Posted by ကိုအောင် at 21:58
ကိုကြီးကျောက်ကို တကယ်ပဲ သတိရမိတယ်း(
31 August 2012 at 22:26
အမယ်... သတိရတိုင်း ဘကျောက်စာတွေ သွားသွားဖတ်ဖြစ်တာ.....
ဘကြီးကျောက်နဲ့ စကားပြောခဲ့တာတွေ ပြန်တွေးတိုင်း သတိရတာ...အ
ခု ကိုအောင့်ဆီမယ် ဘကြီးကျောက်အကြောင်းရေးတော့ မမန့်ပဲမနေနိုင်လို့ လာမန့်ဖြစ်ပါတယ်။
1 September 2012 at 04:48
ဘကျောက်ကြီးဇိမ်ကျနေပေါ့..ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စား ကြီးဒေါ်နွားကျောင်းတာ အိပ်ရေးတွေပျက်လှပြီဗျို့...ဘကျောက်သာရှိရင် ဖွဘုတ်ပေါ်မှာ တော်တော်ပျော်ရှာမယ်လို့တောင် ညီအမနှစ်ယောက်ပြောနေတုန်း ကိုအောင်ကဗျာတက်လာတာဘဲဗျို့...ကဗျာလေးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်....
ကိုကြီးကျောက် ကို အမြဲဘဲ သတိရပါတယ်... ထုတ်ဖော် မပြောမိပေမဲ့ ရင်ထဲမှာ အလွမ်းတွေ အပြည့်ပါ
1 September 2012 at 08:32
အိန်ဂျယ် ဘလော့မှာ မှတ်မှတ်ရရ ဘကျောက်ရဲ့ ကွန်မန့်လေး တစ်ခုသာ ရလိုက်တယ်... အရမ်းကြီး မရင်းနှီးလိုက်ရခင်မှာပဲ သူဆုံးသွားပေမယ့် .. သူ့ကွန်မန့်လေးကို မကြာခဏ ဖတ်မိတိုင်း အပြုံးတွေနဲ့ သတိရမိတယ်အကို..ရေ...။
1 September 2012 at 08:51
အနှီပုံလေး မှတ်မိသဗျာ...ကိုကြီးကျောက်ရဲ့ ကျောက်ဒီဇယ်ပုံပေါ့...ပြောရရင်တော့ ကိုကြီးကျောက်က ကျွန်တော့်ရဲ့ ဘလော့ဂါသူရဲကောင်းဗျ...သူ့ရဲ့ ပုဂ္ဂလိကဘ၀နဲ့ နိုင်ငံရေးခံယူချက် ဖြတ်သန်းမှုတွေကို အကျွမ်းတ၀င် သိပ်မရှိလှပေမယ့် သေခြင်းတရားအပေါ်မှာ သူထားတဲ့ ခံယူချက်နဲ့ ခိုင်မာတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကိုတော့ အမြဲလေးစားနေမိတုန်း...လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ရက်တုန်းက ကိုကြီးကျောက်ကို ထူးထူးခြားခြား သတိတရရှိနေတာနဲ့ ပို့စ်တစ်ခုရေးပြီး ဂုဏ်ပြုဖို့တောင် စိတ်ကူးမိသေးတယ်...ကိုအောင်ရဲ့ပို့စ်ဖတ်ရတော့ ပိုပြီးသတိရပါလေရောဗျို့...
ကွန်ပျူတာပြဿနာလေး ဖြေရှင်းပြီးရင်တော့ ပို့စ်တစ်ခု ရေးဖြစ်အောင် ရေးဦးမဗျာ...
2 September 2012 at 20:50
ဘကြီးကျောက်နဲ့မဆုံးဖူးလိုက်ပေမယ့် ဆုံးသွားပြီးမှ ဘကြီးကျောုးက် ပို့ စ်တွေ အကုန်လုံး ဖတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်..ဘကြီးကျောက်ကို ဘလော့အသိုင်းအဝိုင်းက ချစ်ကြတာ သတိထားမိတယ်..
4 September 2012 at 03:23
6 September 2012 at 05:32
me too, miss ko gyi kyout
7 September 2012 at 18:20
ကျွန်တော်လည်း ဘကျောက်ဆုံးပြီးမှ သူ့ဘလောက်က စာတွေ အားလုံးကို ဖတ်ဖြစ်သွားတယ်။ ရွှေစင်ဦးဆိုက်ကနေတဆင့် ဘကျောက်စီ ရောက်ဖြစ်ခဲ့တာ။ သူ့ပရိသတ် အခိုင်အမာ ဖြစ်သွားချိန်မှာ ကိုကြီးကျောက်က မရှိတော့ဘူးဗျာ။ စိတ်ထဲမှာ မိတ်ဆွေအရင်းကြီးတစ်ယောက်လို ခံစားမိနေတယ်။
တကယ်ကို.. နှမြောတသ သတိတရ ရှိနေမိတယ်။ ဒီနေ့ထိလည်း ကိုကြီးကျောက်နဲ့ ပတ်သက်ခဲ့သူတွေရဲ့ ဆိုက်တွေကို စိတ်ဝင်တစားနဲ့ ကိုကြီးကျောက်သတင်း ဘာများသိရမလဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ သွားဖြစ်နေတုန်းပါပဲ။
အခုလည်း ကိုကြီးကျောက်လွမ်းချင်း ဆိုလို့ တကူတက လာဖတ်ဖြစ်တာ...
10 September 2012 at 20:40
အင်းဗျာာ ရွှေမန်းရောက်ရင် မရွှေစင်တို့ မစည်းစိမ်တို့နဲ့ ပြောဖြစ်တယ် သတိရမိတဲ့အကြောင်း
တဂ်ပို့စ်အကြောင်းကို သရော်ပို့စ်ရေးတာ ဝိုင်းတွယ်ကြသေးတယ်လေ အဲတုန်းက သူကပြုံးပြုံးပဲ ဘလော့လည်းစရေးစပေါ့ အရှိန်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သူ့ပရိတ်သတ်ကိုသူဆွဲဆောင်သွားလိုက်တာ ကိုကြီးကျောက်ရယ်လို့ ဘလော့ရွာမှာ အမည်ကြီးပါ့
ကျွန်တော်လည်း ဟုမ္မလင်းရောက်နေလို့ တခုတ်တရမလွမ်းဖြစ်ဖူးဗျာ
စိတ်ထဲတော့ တွေးမိတုန်း ဆုံတိုင်းလည်း ပြောဖြစ်တုန်း
16 September 2012 at 19:13
phyo phyo said...
ba kyout yay, ba kyout sar tway ko pyan pyan phat phit par tal byar..
Very coincidence, I just read Kogyo Kuauk old posts and share to other.
26 September 2012 at 07:42
ဘကျောက်ကို သတိယတယ် ခဏခဏပါပဲ ကိုအောင် သူရေးခဲ့တဲ့ ငလျင်ကြောင်း ဟိုတလောကပဲ ဖတ်ဖြစ်တယ် တော်တော် မှတ်ညဏ်ကောင်းတဲ့လူ
18 December 2012 at 16:35